जनसम्पर्क समिति जापानमा समानान्तर समिति गठन
२०७३ भदौ ३१ शुक्रबार, जापान। नेपाली जनसम्पर्क समिति जापान अन्तत बिभाजन भएको छ। निवर्तमान सभापती रहेका नारायण सुबेदीले जनसम्पर्क समिती जापानको सभापति आफु नै भएको भन्दै हिजो जापानको गाँउ ईलाकामा पर्ने गुन्मा केनमा भेला भएका काँग्रेस कार्यकर्ताहरुलाई समेट्दै समानान्तर कमिटी गठन गरेपछि नेपाली जनसम्पर्क समितिमा विभाजन देखिएको हो। गणेशमान स्मृती दिबस र बिपी जयन्ती मनाउन भेला भएकाहरुले समानान्तर कमिटी गठन गरेका हुन्। भेलाको जानकारी जापानका कुनै संस्था, काँग्रेस शुभेच ... बाँकी अंश»
साउदीका पीडित नेपाली माझमा पुगे श्रेष्ठ
२०७३ भदौ ३० बिहिबार, साउदी अरब । पूर्व उप प्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले साउदी अरबको अनौपचारिक तीन दिने भ्रमणको क्रममा पीडित प्रवासी नेपालीहरुसँग भेटेका छन् । श्रेष्ठले प्रवासी पीडितको समस्याका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र श्रम तथा रोजगार मन्त्री र सचिव समक्ष गम्भिरतापूर्वक छलफल गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ नेपाली जनप्रगतिशील मंच, साउदी अरबको चौथो एकताको महाधिवेशनक ... बाँकी अंश»
मलेसिया गएका वलीको मृत्यु
२०७३ भदौ २८ मंगलबार, सल्यान । रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया पुगेका घाँजरी पिपल–७ सङ्ग्रहीका ४३ वर्षीय ज्ञानबहादुर वलीको मृत्यु भएको छ । एक वर्षअघि रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका वलीलाई आइतबार राति डब्लु।एसएम।कोसोन फाइभ कम्पनीमा ड्युटीमा खटिएको बेला पेट दुखेपछि अस्पताल लगिएको थियो । वलीको उपचारकाक्रममा मृत्यु भएको मृतक वलीकी श्रीमती सन्तु वलीले जानकारी दिइन् । वलीको शव मलेसियाकै अस्पतालमा रहेकाले उनले शव ल्याउनका लागि सहयोग गरिदन आग्रह गरेकी छिन् ... बाँकी अंश»
२०७३ भदौ २७ सोमबार, बेलायत। नेपाल तरुण दलको चौथो महाधिवेसनको पूर्व सन्ध्यामा नेपाल तरुण दल बेलायतले पनि आफ्नो दोस्रो अधिवेसन सम्पन्न गरेको छ। दलका अध्यक्ष सुरेश जमरकट्टेलको अध्यक्षतामा लन्डनमा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल तरुण दल बेलायतका सम्पूर्ण सदस्यहरु, सुबेच्छुक तथा सल्लाहकारहरुको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाल तरुण दलका सदस्यहरुको मात्र उपस्थितिमा भएको बन्द सत्रबाट नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको छ। निर्वाचित कार्यसमितिका अध्यक्षमा निबर्तमान सचिब विश्व घ ... बाँकी अंश»
साउदी पुगेका दुई नेपालीको मृत्यु
२०७३ भदौ २६ आइतबार, नवलपरासी । रोजगारीका लागि साउदी पुगेका नवलपरासीका दुई व्यक्तिको पछिल्लो एक सातामा मृत्यु भएको छ । साढे दुई वर्षअघि रोजगारीका लागि गएका मध्यविन्दु नगरपालिका साविक तम्सरिया–५, नवलपरासीका ४६ वर्षीय खुइतप्रसाद महतोको हृदयाघातका कारण मृत्यु भएको हो । दश वर्षदेखि सो कम्पनीमा कार्यरत उनी बिरामी भएर अस्पताल लैजाने क्रममा नै मृत्यु भएको सुरक्षित आप्रवासन सूचना तथा परामर्श केन्द्र, कावासोतीले जनाएको छ । त्यस्तै तीन महिनाअघि सा ... बाँकी अंश»
२०७३ भदौ २५ शनिबार, रेडिङ्ग, युके। यस वर्ष जीसीएस्ई उत्तिर्ण नेपाली विद्यार्थीहरुलाई हाइली स्किल्ड माइग्रयान्ट फोरम रेडिङ्गले सम्मान गरेको छ। उक्त ' जीसीएस्ई एप्रिसिएसन’ कार्यक्रममा जीसीएस्ई उत्तीर्ण २८ जना विद्यार्थीहरुलाई ट्रफी र प्रमाणपत्र प्रदान गरी सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी तथा रेडिङ्ग् यूनिभर्सिटी मोडर्न ल्यांगवेज एन्ड यूरोपियन स्टडिजकी अध्यापक डा. एलिसन मार्टिनले यूनिभर्सिटीमा प्रवेश पाउन आवश्यक कुराहरुको चर्चा गर्दै स ... बाँकी अंश»
डा. बाबुराम भट्टराईले जापानमा नयाँ शक्तिको बारेमा प्रवचन दिने
२०७३ भदौ २१ मंगलबार, जापान। पुर्व प्रधानमन्त्री एवम् नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई जापान आउने भएका छन्। सेप्टेम्बर १८ तारिक आईतबार "नेपालको समग्र विकास र समृद्धिको लागि प्रवासी नेपालीहरुको भुमिका तथा आवश्यकता" विषयमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न जापान आउने भएका हुन्। नयाँ शक्ति पार्टीको प्रवासी संगठन जापानले आयोजना गरेको कार्यक्रम सुगीनामी कु उमेजातो १-२२-३२ सेसन सुगीनामी हल टोकीयोमा हुनेछ। नयाँ शक्ति जापानका अभियन्ता तथा प्रवास प्रा ... बाँकी अंश»
टोकियोको 'तीज महोत्सव'मा यसरी नाचे नेपाली महिला
२०७३ भदौ १५ बुधबार, टोकियो। तीज महोत्सवमा नेपालबाट आएका कलाकारको प्रस्तुतीले टोकियोको मेगुरो कुमिन सेन्टर तीजमय बन्यो। मंगलबार 'म नेपाली ग्रुप' जापानले आयोजना गरेको तीज महोत्सव कार्यक्रममा चर्चित गायिका सुनिता दुलाल, गायकद्वय प्रकाश कटुवाल र बैकुण्ठ महत लगाएतको प्रस्तुती रहेको थियो। मेगुरो कुमिन सेन्टरहल सारी र कुर्तामा सजीएका दिदिबहिनीले भरिएको थियो। 'अब त मैलेनी झुम्का लगाउछु' बाट आफ्नो प्रस्तुती पस्केकी चर्चित गायीका सुनिता दुलालले थुप्रै गितमा द ... बाँकी अंश»
भारतमा पत्रकार अधिकारी सम्मानित
२०७३ भदौ १३ सोमबार, नयाँ दिल्ली। पत्रकार ऋषि राम अधिकारी सम्मानित भएका छन्। नयाँ दिल्ली स्थित एक भव्य कार्यक्रमका बीच उनलाई सम्मान गरिएको हो। विशेषगरी दिल्लीमा रही सिए अध्ययन गरिरहेका नेपाली सिए विद्यार्थीसंग सम्बन्धित समाचारहरु सम्प्रेषण गरेकोमा उनलाई भारतमा रही सिए अध्ययन गरिरहेका नेपाली सिए विद्यार्थीहरुको संगठन मध्येको एक हातेमालो नेपाली विद्यार्थी समूहले सम्मान गरेको हो। हातेमालोले प्रदान गरेको सम्मानबाट आफुलाई अझ जिम्मेवार बन्न प्रोत्शाहन मिल ... बाँकी अंश»
जनसम्पर्क समिती जापानमा कँडेल प्यानल विजयी
२०७३ भदौ १२ आइतबार, जापान। नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानमा डिपी कँडेल प्यानल बिजयी भएको छ। निर्वाचन कमिटीका संयोजकले दिएको राजिनामा स्विकृत भईनसकेकोले निर्वाचन कमिटीका सदस्य बिनोद खनालको उपस्थिति तथा महाधीबेसन प्रतिनिधीहरु सुबास लोहनी, पासाङ शेर्पा, पूर्व महाधिबेसन प्रतीनिधी तथा काउन्सिल सदस्य कपिलदेब थापा लगायतको उपस्थितीमा मतगणना सम्पन्न भएको थियो। निर्वाचनमा रोशन केसी पक्षले उमेदवारी दर्ता गरेपनि मतगणना बहिस्कार गरेको थियो। तर मत गन्दा त्यस्तो अवस ... बाँकी अंश»
तीज महोत्सवका लागि सुनिता दुलाल सहितका कलाकारहरु आईपुगे जापान
२०७३ भदौ ११ शनिबार, टोकियो। टोकियोमा रहेका नेपाली महिलाहरुको समूह‘म नेपाली ग्रुप’जापानले हिन्दू नारीहरुको महान चाड हरितालिका तीजको अवसरमा आयोजना गर्न लागेको दुई दिवसीय ‘तीज महोत्सव २०१६’को लागि कलाकारहरु जापान आईपुगेका छन् । यहि अगष्ट २८ तारिख आइतबार इकेबुकुरो कुमिन सेन्टर र ३० तारिख मंगलबार मेगुरो कुमिन सेन्टरमा हुने दुई दिवसीय ‘तीज महोत्सव २०१६’का लागि चर्चित लोक गायिका सुनिता दुलाल, चर्चित गायक प्रकाश कटुवाल र चर्चित लोक गायक बैकुण्ठ महत जापान ... बाँकी अंश»
नेपाली जनसम्पर्क समिति क्यानडामा पौडेल
२०७३ भदौ ९ बिहिबार, क्यानडा। नेपाली जनसम्पर्क समिति, क्यानडाको हालै सम्न्न ऐतिहासिक बिशेष भेलाले सभापतिमा तुल्सी पौडेल सहित कार्यसमिति चयन गरेक छ। कार्यसमितिको उपसभापतिमा सुरज पाण्डे, महामन्त्रीमा दिपक सापकोटा, कोषाध्यक्षमा विद्याभूषण कार्की र सहमहामन्त्रीमा विनय न्यौपाने निर्वाचित भएका छन्। त्यसैगरि कार्यसमिति सदस्यहरुमा ऋषि तिवारी, अम्बिका ज्ञवाली, सुर्य सापकोटा, ऋषिकेश घिमिरे, रामबाबु थापा, अन्जु बिष्ट, दिपेन्द्र पौडेल, लक्ष्मण पाण्डे, कमला शर्मा, जग ... बाँकी अंश»
काँग्रेसीहरुबीच तनाव भएपछि जनसम्पर्क समिति जापानको निर्वाचन रोकियो
२०७३ भदौ ६ सोमबार, जापान। नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानको निर्वाचन रोकिएको छ। पार्टी कार्यालयले पत्र पठाइ निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिएपछि चुनाव रोकिएको हो। यही २१ अगष्टमा हुन भनिएको निर्वाचनका क्रममा तनावको स्थिति सिर्जना भएपछि काँग्रेसले चुनाव स्थगित गरेको हो। नेपालका विभिन्न ठाउँमा क्रियाशिल सदस्यता रहेका व्यक्तिहरुले जापानमा आफ्नो क्रियाशिल सदस्य सारेको भन्ने विवाद वढ्दै जाँदा तनाव भएको थियो। यहि विषयमा काँग्रेस कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद ... बाँकी अंश»
राजनीतिक जोड-घटाउले देश खोक्रिदै छ : पूर्वअध्यक्ष रेग्मी
२०७३ भदौ ५ आइतबार, न्युयोर्क । मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले राजनीति जोडघटाउको संक्रमणमै अल्झिंदा देश कहालिलाग्दो रुपमा खोक्रिदै गएको जिकिर गरेका छन् । नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ ( नेजा) ले न्युयोर्कमा शनिबार आयोजना गरेको सामुदायिक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा रेग्मीले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । “ज्यान जोखिमा राखेर कामदारहरुले विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सले उपभोक्तावादी अर्थव्यवस्थामा आयातबाट उठेको राजस्वले धेरै हदसम्म सरकारी खर् ... बाँकी अंश»
जनसम्पर्क समिति जापानमा प्रचारप्रसार तीव्र, कँडेल र केसीबीच प्रतिष्पर्धा
२०७३ भदौ ३ शुक्रबार, जापान। नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानमा अधिवेशनको सरगर्मी बढेको छ। १४अगष्टमा बिधानसभा सम्पन्न गरि यही २१ अगष्टमा हुन गइरहेको सो अधिवेशनको प्रचार प्रसार तथा प्रतिबद्धताहरूका साथ उम्मेद्वारहरु मतदाताहरुसमक्ष पुगिरहेका छन्। जापानमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली काँग्रेस समर्थित नेपालीहरुले आ आफ्ना एजेण्डका साथ आफ्नो पक्षमा मत पार्नका लागि केही दिनअघि देखि नै प्रचार प्रसार अभियानमा जुटेका छन्। उम्मेदवारहरु चुनावी रणनीति बनाउन र मत माग्न व्य ... बाँकी अंश»
जनसम्पर्क समिति जापानमा चुनावी रौनक
२०७३ भदौ २ बिहिबार, जापान। नेपाली जनसम्पर्क समितिमा जापानमा आवद्धहरुलाई चुनावी महौलले छोपेको छ। समिती छैठौ महाधिबेसनले नेतृत्व चयन पनि गर्ने भएका कारण उम्मेदवारहरु चुनावी रणनीति बनाउन र मत माग्न व्यस्त देखिन्छन्। चुनावमा दुई प्यानल हुने लगभग निश्चित देखिएको छ। डिपी कंडेल प्यानल ले २९ जनाको प्यानल मनोनयन दर्ता गरेको छ। जसमा सभापती पदमा डण्डपानी कँडेल, महामन्त्रीमा रामजँग कार्की, कोषाध्यक्षमा बाबुराम सापकोटा रहेका छन्। खुल्ला सदस्यहरुमा राजेन्द्र प्रसाद जम ... बाँकी अंश»
सुरु भयो तिजको माहोल, पोख्रेली दिदी बहिनी समुह जापानले खुवाए तिजको दर
२०७३ श्रावण ३२ मंगलबार, टोकियो। सधै ब्यस्त रहने जापानका दिदी बहिनीहरुले शनिबार भने दर समेत खान र खुवाउन समेत भ्याएका छन्। पोख्रेली दिदी बहिनी समूहको आयोजनामा रमाईलो तिज २०७३ कार्यक्रमसँगै दर र नाचगान गर्न भ्याएका हुन। पोखराबाट जापान आई विभिन्न पेशा व्यवसायमा आवद्ध पोख्रेली दिदी बहिनी समूहले टोकियोको सिनओकोबुस्थित नेपाली मुरा हलमा सो कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो। रमाईलो नाँचगानको कार्यक्रमसँगै औपचारिक रुपमा उद्घाटन् गरिएको कार्यक्रम संस्थाकी कार्यबाहक अध्यक्ष ... बाँकी अंश»
जनसम्पर्क समिति जापानको सभापतिमा केसीको प्यानलले गर्‍यो उम्मेद्बारी घोषणा
२०७३ श्रावण ३० आइतबार, जापान । नेपाली कांग्रेसको विदेशस्थित संगठन नेपाली जनम्पर्क समिति जापानको छैठौं अधिवेशनमामा रोशन केसीको प्यानल्ले उम्मेद्बारी घोषणा गरेको छ । अधिवेशन उद्घाटन पछि शनिबार भएको छलफलबाट सभापतिमा केसीको समूहले उम्मेद्बारी घोषणा गरेको हो । केसीको प्यानलबाट महामन्त्री मा रेशम डङ्गोल र कोसाध्यक्षमा सावित्री लामा ले उम्मेद्बारी दिएका छन् । यस्तै, सद्स्यहरुमा सुजन जोशी , पिताम्बर चापगार्इ ,रामकृष्ण बम मल्ल , विष्णु अर्याल, ... बाँकी अंश»
जनसम्पर्क समिती जापानमा डिपी कडेल प्यानलको उमेदवारी घोषणा
२०७३ श्रावण ३० आइतबार, जापान। नेपाली जनसम्पर्क समिती जापानको अधिबेसनको पहिलो चरण अन्तर्गत बिधान सभा सम्पन्न भैसकेको छ। २१ तारीक निर्वाचन हुने निश्चीत भइसकेपछी उमेदवारी घोषणा हुने क्रम बढेको छ। आइतवार साँझ डिपी कडेलले पत्रकार सम्मेलन सहित उमेदवारी घोषणा गर्दैछन। प्यानलका उमेदवारहरु सहित जापानमा रहेका कांग्रेस शुभेच्छुकहरु सबैलाई बोलाईएको उमेदवारी घोषणा सभामा डिपी कडेलको उमेदवारीलाई बर्तमान महामन्त्री राजेन्द्र जमरकट्टेल र बर्तमान उपसभापति पुस्करजँग थापाले समर ... बाँकी अंश»
जापानमा नेपाल फेस्टिवल सुरु, पहिलो दिननै अवलोकनकर्ताहरुको भिड
२०७३ श्रावण २३ आइतबार, टोकियो। “अतिथि देवः भव ”भन्ने नाराका साथ आज टोकियोको योगी पार्कमा, नेपाल फेस्टिवल सुरु भएको छ। एनआएनए जापानद्वारा जापानी समुदायमा नेपाल र नेपाली कला संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजित दुईदिने नेपाल फेस्टिवलको शनिवार औपचारिक उद्घाटन गरिएको हो। फेस्टिवलको, प्रमुख अतिथि जापानका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत कृष्णचन्द्र अर्याल, जापान सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय दक्षिण एसिया विभागका प्रमुख अरियोसी ताकासी, एनआरएनए आईसीसी उपाध्यक् ... बाँकी अंश»